रुरु जलविद्युतको आइपिओ आजदेखि खुल्यो, तपाईले भर्नुहुन्छ ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more रुरु जलविद्युतको आइपिओ आजदेखि खुल्यो, तपाईले भर्नुहुन्छ ?
रुरु जलविद्युतको आइपिओ आजदेखि खुल्यो, तपाईले भर्नुहुन्छ ?
चैत २० गते, २०७७ - ०९:५२
काठमाडौं । रुरु जलविद्युतले सर्वसाधारणका लागि आईपिओ खुला गरेको छ । आज शुक्रबारबाट सर्वसाधारणले आईपिओमा आवेदन दिन पाउने छन् ।
कम्पनीले अंकितमूल्यमा २० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर १२० रुपैयाँ दरले कुल ४ करोड ८९ लाख २४ हजार ७२० रुपैयाँबराबरको आईपीओ गरेको हो।
कम्पनीले कुल ४ लाख ७ लाख ७०६ कित्ता सेयर निष्कासन गरेको छ। जसमा २ प्रतिशतले हुन आउने ८ हजार १५४ कित्ता कर्मचारीका लागि र ५ प्रतिशतले हुन आउने २० हजार ३८५ कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ भने बाँकी ३ लाख ७९ हजार १६७ कित्ता सेयरमा सर्वसाधारणले आवेदन दिन पाउनेछन्।
रुरु जलविद्युतको आईपीओमा निष्कासन बन्द छिटोमा चैत २४ गते र ढिलोमा वैशाख ३ गते बैंकिङ समयपछि हुनेछ।
चैत २० गते, २०७७ - ०९:५२ मा प्रकाशित